Ireo Mpiara-miasa sy mpanohana - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Momba ny Lemur Conservation Network › Ireo Mpiara-miasa sy mpanohana
Ireo Mpiara-miasa sy Mpanohana anay
Ny primate Specialist Group dia tambazotra iraisam-pirenena izay hiombonan’ireo siantifika sy ireo mpiaro ny tontolo iainana. Anisan’ny hifantohan’ny asan’izy ireo ny fampirisihina ny fikarohana mikasika ny ekolojia sy ny fiarovana ireo « primates » izay misy karazany efa ho aman-jatony- tahaka ny rajako , « apes », ny gidro/varika na ihany koa ireo mitovy aminy fa saingy mivoaka amin’ny alina ihany.
Mila mpanohana ny Lemur Conservation Network
Ny fijerena ny sata sy ny fiarovana ny « primate » maro isan-karazany no andraikitrin’ny PSG voalohany indrindra amin’ny alalan’ny fampiasana ireo vaovao voaray avy amin’ireo manam-pahaizana izay miasa any an-toerana. Izany rehetra izany dia manampy be dia be tokoa ny IUCN Red List amin’ny fahafantarana ny fiantraikany izany eo amin’ny fahasimban’ ny tontolo iainana indrindra fa eo anivon’ny biby sy zavamaniry.
Ho fanampinin’izany ny PSG dia manana tetik’asa « Action Plans » izay lehibe koakoa no sady amin’ny antsipirahany ka ny fiarovana karazana manokana no lasibatra amin’izany mba hanamora ny fametrahana sy fanatanterahana ny fandaharank’asa ho fiarovana azy ireny.
Izahay dia mitady mpanohana hatrany mba hanampy anay ato amin’ny Lemur Conservation Network. Koa raha liana ny amin’izany ianao dia aza misalasa mameno ilay « contact form » aty aminay.